Kuzo zonke izindlu, yiqiniso, kune-jeans endala. Indwangu abaxhunyiwe ngayo iyamangaza ngokumangalisayo. Kodwa inkinga ukuthi bavame ukuphuma emfashini, futhi ngezinye izikhathi bayeke ukulingana ngobukhulu. Kwenzeka ukuthi baphuthuma ngokuzumayo. Futhi kufanele senzeni nabo? Sula ngaphandle kokubona? Noma unike omunye njengomuntu? Ngokuvamile sivele sibalahle nje. Futhi ngeze ...
Ngaphandle kwefashini noma i-jeans engapheli, kuvela, kungase kufike kahle. Ukusebenzisa ukucabanga nezandla ezihlakaniphile, lezi zibhulukwezi zingayisebenzisa, besebenzisa imibono yabakhi bezintandokazi kanye nabamakhosi.
Ngakho ungenzenjani nge jeans endala? Yiziphi izinhlobo zezingubo ezikhethekile ezingakhiwa kuzo izingane? Sizokhuluma ngesikhathi esisodwa - uma kwenzeka, uma ungakwazi ukuthunga, akufanelekile ukuqala lo msebenzi. Kodwa uma usebenzisa ubuncane bokubheka ubuciko, sebenzisa ngaphandle kokucabanga.
Ukuze udwebe izingubo zezingane, okokuqala udinga i-trousers, okuyinto, ukusika amabhulukwe akho, udinga ukugeza nokunsimbi. Qala ukwenza. Yini okufanele uqale? Ake senze i-sundress. Uma le ntombazane encane, khona-ke ukusetshenzwa kwe-sarafan kuyoba nokwanele nomlenze owodwa. Akudingeki ukuba ihlukaniswe ngokukhethekile, nje ukusekela noma ukusika izintambo, ukusabalalisa ngenqunu futhi uqhubeke nokusika ingxenye yangaphambili ye-sarafan (lapha udinga ingxenye eyodwa yomlenze). Ukuze wenze lokhu, sebenzisa iphethini bese uyihlobisa. Yenza okufanayo ngemuva kwe-sundress yesikhathi esizayo. Ngemva kokusika izingxenye zombili bese ubeka izingxenyeni zamaphethelo nezinhlangothi, phatha izingxenyeni ze-armhole nentamo yentamo. I-sarafan ingahlotshwa ngazo zonke izinhlobo ze-appliqués, amaphakethe okugcoba nokuhlobisa. Yileyo ndlela ikhabethe entsha yengane yakho evele ngayo.
Ngendlela efanayo, ungadonsa isiketi esikhwameni esinekhanda, uhlanganiswe i-visor, i-breeches ne-kepi. Kanti futhi imfashini izobheka isikhwama sezicathulo, icala eliphansi lesesekeli zesikole, icala lefoni nezibuko, neminye imisebenzi eminingi yezandla ezoba usizo ezinganeni. Buza ingane yakho, futhi mhlawumbe uzoba nemibono ehlakaniphile ekhanda lakhe?
Izilwane ezincane ezithandekayo
Uma kukhona izilwane endlini yakho, khona-ke kudingeka badle isikhathi sabo nothando, ngoba nabo bangamalungu omndeni wakho. Futhi ubani ozokwenza kube ngcono? Ngakho kusuka ku-jeans endala yesilwane sakho, ungasungula okuthile okuthakazelisayo nokuwusizo.
Ingabe ugqoke umngane wakho onamagundane amane izingubo ezinhle? Bese uyigqoka kahle futhi ngendlela enhle. Ukuze wenze lokhu, lungiselela i-trousers kanye nasesikhathini sokuqala. Uma unephethini elenziwe ngomumo, izikrini nomshini wokuthunga, qala ukusebenza.
Nazi eminye imibono esifuna ukwabelana nawe-kungenzeka ukuthunga upholstery entsha yendlu yekati noma ikhava ye-denim ye-mattress. Indwangu ye-Denim, ngendlela, inamandla kakhulu ukuthi ungenza i-harness ne-harness, ne-collar, ne-leash.
Kumele ngithi kunemibono eminingi lapha, ngoba ukuqaliswa okungakhonza njengama jeans endala. Ngakho-ke, sithatha ama-jeans ethu amadala emabhokisini ethu, sizibophe ngamathuluzi adingekayo (izikhali, insimbi, umshini wokuthunga, i-crochet hook kanye nezintambo zombala ogqamile). Ingabe kukhona imiphi imibono efanelekayo? Uma kungenjalo, ke, njalonjalo, sizokuphonsa kuwe.
Ake siqale ngezindwangu ezibukeka kahle kakhulu emabhentshini ekhishini noma ngefenisha ephakanyisiwe. Ungakwazi futhi ukuthunga izinto ezinokuzithokozisa ngemithwalo yokuhlobisa. Awekho ukuhlakanipha okhethekile lapha, ngoba i-rasp entanyeni futhi igxile emaphethelweni wekhava eliqunyiwe ngomugqa oqondile ungakwazi ukubusa. Ukubeka iphutha, lemikhiqizo ingenziwa ngisho nemifino emihle, okungukuthi, ingahlotshiswe nge-embroidery, stitches, relief et crocheting.
Uma unayo inqubo yokuthunga i-patchwork, ungenza ama-paddles nama-capes. Ukuze wenze lokhu, vele uthathe i-jeans ibe yi-shreds yanoma yiluphi uhlobo lwama-triangles, izikwele, njll. Bese ucabanga ngesibonelo futhi usebenzise indlela yokuqoqa amapuzzli ukuxhuma lezi zingcezu.
Indwangu ye-Denim ilula kakhulu ngoba ikhava, eyenziwe ngayo ngale ndlela, izobukeka ikhangele kokubili kusukela ngaphakathi nangaphakathi. Enye i-nuance - ama-shreds angahlanganiswa ngaphandle kokugxuma, ngendlela yokubopha nge-hook, bese exhuma nabo ngosizo lwakhe.
Okulandelayo, cabangela ama-rugs. Zenziwe ngendlela efanayo neveli. Impela umehluko wukuthi lapha, eceleni kochungechunge, ubhedu bubekwe uphawu, njengokuba kunjalo, isisekelo somkhiqizo. Lezi zingubo zingahlobisa nje igumbi lokugezela kanye nendawo yokugezela. Ngokubekezela okuncane nokucabanga, ungenza i-carpet ephathekayo yehholo noma igumbi lokulala. Ngendlela, leli khaphethi lenye yezinhlobo zalo, i.e. okukhethekile. Ungakwazi futhi ukusika izigqoko zama jeans bese uthayipha i-crochet. Uma wazi ukugoqa ngesikhathi esifanayo, khona-ke lo mbono, sicabanga ukuthi uzowuthanda. Iphaneli lokudonga lizohlobisa izindonga zakho futhi linike induduzo ekhaya lakho.
Lapha uzodinga, futhi, i-jeans endala kanye nesikhathi, okwenzelwe othandekayo wakho awusoze waba nesihawu. Ngakho uchitha nini isikhathi sakho nejee, owawujwayele ukugqoka ngenjabulo? Futhi kulo mkhakha kuneminye imibono ... Lezi yi-slippers ekhaya, izikhwama, izikhwama, zonke izinhlobo zamacala amafoni namapensela, izigqoko nama-aprons nokunye okuningi, konke kuxhomeke emcabangweni wakho.
Uma uthanda, ungavuselela imikhiqizo yasekhishini yezindwangu-yindwangu yesetafula, umcamelo wekhishi ekhishini, abaxhasi. Uma unemoto, khona-ke kuyoba ngempumelelo kakhulu ukubheka izembozo, ezenziwe ngendwangu yendwangu. Ngamafuphi, isikhathi esisetshenziselwa othandekayo ngeke sichitheke, ngoba zonke izinto ezenziwe ngezandla zakho zizokulethela imizwelo emihle engakaze ibe yinto engafaneleki.
Nikeza umbono wakho nobuhlakani ... Hlela impilo yakho ngemibono emisha ...
Imisebenzi engcono kakhulu esikoleni samabanga aphansi ngo-Mashi 8: master amakilasi nezithombe namavidiyo
Amacici-i-snowflakes kusuka ebuhlalu, i-master class kanye nesithombe
Indlela yokwenza izimbali zokufakelwa ngezandla zakho
Ukudweba "Flower in a Vase" ngezigaba zabaqalayo. Indlela yokudweba ipenkila enhle yembali - imithombo yezingane
Masks original Christmas
Indlela yokulondoloza ubudlelwane bomndeni
Isaladi ngenyama enobisi
Uhlelo lokusebenza lwe-Clover kumuthi womuntu
Indlela yokubhekana nokucindezeleka ekhaya
Indlela yokukhetha ingubo efanele?
Amavesi kaKhisimusi kubantwana nakubantu abadala
Biography of umlingisi Dmitry Dyuzhev
Izifo zezingane ezingaphansi konyaka owodwa ubudala
U-Dmitry Nagiyev uvele esithombeni "sokulinganisa" ngezimpawu
Recipe "Rafaello" ekhaya
Amakhukhi weSuku lwe-Valentine ngokugcwalisa i-cherry
Yini okufanele uyenze uma izinzwani ezinomsindo
Amakhambi omphakathi wokuthuthukisa umbono
Izitsha ezingcono kakhulu ezivela kumakhowe